I-EasyJet iphuma eGatwick Airport ku-Sustainable Aviation Fuel
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Airport » I-EasyJet iphuma eGatwick Airport ku-Sustainable Aviation Fuel
Airlines • Airport • zezindiza • Izindaba Ezintsha zaseYurophu • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Ukwakha kabusha • Unomthwalo wemfanelo • Ubuchwepheshe • Ezokuvakasha • Transportation • Izindaba Zocingo Lokuhamba • Izindaba ze-UK Breaking
I-EasyJet iphuma eGatwick Airport ku-Sustainable Aviation Fuel.
Izindiza ezingama-42 ze-easyJet ezisebenza kusuka eGatwick Airport zizonikezwa amandla ngenhlanganisela yeNeste MY Sustainable Aviation Fuel.
Okokuqala indiza ehamba eGatwick isebenzise uphethiloli wezindiza osimeme (SAF).
I-Q8Aviation ihambise ukunikezwa kokuqala kweNeste MY Sustainable Aviation Fuel ekuphakelweni kukaphethiloli eGatwick Airport.
Kuqinisekisa ukuzibophezela okuqinile kwazo zonke izinhlaka ezithintekayo ukufeza ukuncishiswa kwekhabhoni okuphelele kukaphethiloli osetshenziswe ezindizeni futhi kusebenze kufinyelela enhlosweni yokugcina yezindiza ukufinyelela emkhathini ongapheli ngo-2050.
Ngokuqala kokuhamba namuhla, izindiza ezingama-42 ezilula zeJet ezisebenza kusuka I-Gatwick Airport zizonikezwa amandla ngomxube we-Neste MY Sustainable Aviation Fuel ™. Le ngqophamlando ebalulekile ibonakalisa okokuqala lapho indiza ehamba eGatwick isebenzisa uphethiloli wezindiza osimeme (SAF) futhi iphinde ibe ukusetshenziswa kokuqala kwanoma iyiphi insiza ye-easyJet. Iqinisekisa ukuzibophezela okuqinile kwazo zonke izinhlaka ezithintekayo - umhlinzeki wamazwe omhlaba wezokuthuthwa kwamafutha e-Q30Aviation, EasyJet, Gatwick Airport Ltd naseNeste - ukufeza ukuncishiswa kwekhabhoni ophethiloli osetshenziswayo ezindizeni futhi kusebenze kufinyelela enhlosweni enkulu yezindiza ukufinyelela umkhawulo weziro ngo-2050.
Ezindizeni ezingama-42 ezihamba ngenhlanganisela yeNeste MY Sustainable Aviation Fuel, ezingama-39 kuzo kuzoba EasyJet izindiza ezisuka eGatwick ziye eGlasgow kuyo yonke ingqungquthela ye-COP26 Climate Change, eqala ngomhlaka 31 Okthoba kuya ku-12 Novemba. Kuzo zonke izindiza ezingama-42, ukukhishwa kwegesi ebamba ukushisa kuzoncishiswa kuze kufike kumathani angama-70 okuqhubeka nokukhombisa izinhloso zemboni zokunciphisa ukukhishwa kwegesi engcolisa izinga lokushisa emgodini wokufinyelela ekushisweni okuphelele kuka-zero ngo-2050.
I-Q8Aviation ihambise ukunikezwa kokuqala kukaNeste MY Sustainable Aviation Fuel kokuphakelwa kukaphethiloli e- I-Gatwick Airport. Uphethiloli wezindiza osimeme ohola phambili ezimakethe zakwaNeste, oqinisekiswe ngokuphelele, ukhiqizwa kusuka kungu-100% wemfucumfucu evuselelekayo nokusimeme kanye nezinto zokusetshenziswa ezinjengamafutha okupheka asetshenzisiwe kanye nodoti wamafutha ezilwane. Ngendlela yayo ehlelekile nangaphezu komjikelezo wayo wempilo, iNeste MY Sustainable Aviation Fuel ingafinyelela ekwehliseni kufika ku-80% * wokukhishwa kwegesi ekhipha ukushisa uma kuqhathaniswa nokusetshenziswa kukaphethiloli wezindiza ezindala.
I-SAF ekhiqizwe kwaNeste ixutshwe nophethiloli weJet A-1 edepho engenhla nomfula esikhumulweni sezindiza iGatwick ukudala uphethiloli wokudonsa ohambelana nezinjini zezindiza ezikhona nengqalasizinda yesikhumulo sezindiza, ngaphandle kokudinga imali ethe xaxa. I-Q8Aviation ihambise uphethiloli emathangini amakhulu okugcina eGatwick Airport ukuze anikezwe izindiza ze-EasyJet ngohlelo lwamapayipi omoya wesikhumulo sezindiza.
Ukufakwa kweSAF emisebenzini kaGatwick yendiza yanamuhla kuwubufakazi obubalulekile bomqondo esikhumulweni sezindiza ekuboniseni ukuzibophezela okuqhubekayo ekusebenzisaneni nabalingani baso bezindiza ekwenziweni kwamabhanoyi. Umkhondo wekhabhoni kaGatwick ka-2019 ukhombisile ukuthi isikhumulo sezindiza sesivele siyindlela yokuthola u-zero ngemisebenzi yaso futhi sizibophezele ekufezeni ukukhishwa okuqondile kweNet Zero ngonyaka ka-2040.
UJonathan Wood, iPhini likaMongameli waseYurophu, i-Renewable Aviation eNeste uthe: “Imboni yezindiza isivele ithathe izinyathelo ezibalulekile ukunciphisa umthelela wayo kwezemvelo. Into esemqoka ekufezeni lokhu ukwethulwa okubanzi kukaphethiloli wezindiza osimeme. AbakwaNeste batshala imali njengoba sikhuluma nje ukukhulisa umthamo wokukhiqiza weSAF usuke kumathani wamathani ayizi-100,000 1.5 kuya kumathani ayizigidi eziyi-2023 ngonyaka ngonyaka wezi-8. INeste yamukela iziphakamiso zikahulumeni zokukhuthaza ukusetshenziswa kweSAF ukwehlisa ukukhishwa kwegesi yezindiza. Kubalulekile ukuthi izinkampani eziningi zezindiza, izikhumulo zezindiza kanye nabaphakeli bamafutha bahole indlela eya ekusaseni eliqhubekayo lezindiza. Siyajabula ukwamukela i-easyJet, i-QXNUMXAviation neGatwick Airport phakathi kwalaba abahamba phambili. ”
UNaser Ben Butain, iMenenja Jikelele i-Q8Aviation uthe: “Kuyasijabulisa ukudlala indima yethu ekunikezeleni uphethiloli wokuqala wezindiza ku-easyJet eGatwick. Sakhe ubambiswano oluqinile ne-easyJet eminyakeni eminingi, futhi sizuza ngokuxhaswa okuhle ngabakwaGatwick Airport Ltd kanye nabakwaNeste, futhi sibheke phambili ekusebenzisaneni nabo bonke ozakwethu ukufeza izinhloso zethu zokusimama. ”
Jane Ashton, Umqondisi Wezokusimama e EasyJet uthe: “Ku-easyJet, sifuna ukudlala indima yethu ukuhola ekuhlukanisweni kwezindiza. Siyajabula ukumemezela ukuthi namhlanje sisebenzisa i-SAF njengobufakazi bendiza esuka eGatwick futhi esizinikele ekusebenziseni inhlanganisela ye-SAF kuzo zonke izindiza ezisuka eGatwick ziye eGlasgow kuyo yonke i-COP26, ngenxa yomzamo wokubambisana nabalingani bethu ababandakanyekile kule phrojekthi. Ukutholakala kweSAF kusadinga ukukhula kepha kuzoba yisixazululo esibalulekile sendlela yethu yokwenza i-decarbonisation, ngenkathi sisekela ukwakhiwa kwezindiza ezingama-zero-emission, okuzoba yisixazululo esimeme kakhulu samanethiwekhi athutha isikhashana njengawethu isikhathi eside. Okwamanje, sisebenzisa izindiza zethu ngendlela efanele ngangokunokwenzeka futhi njengamanje yiyona kuphela inkampani enkulu yezindiza yaseYurophu eqeda ukukhishwa kwekhabhoni kuphethiloli osetshenziselwa zonke izindiza zethu, okunomthelela njengamanje. ”
UTim Norwood, onguMqondisi weCorporate Affairs, Planning and Sustainability of Gatwick Airport uthe: “Kuyasijabulisa kakhulu ukusebenza ne-easyJet, Q8Aviation kanye neNeste ukukhombisa ukusetshenziswa kweSAF eGatwick Airport. I-SAF ingenye yezindlela eziningi lapho i-UK yezindiza kanye neGatwick izofinyelela ngayo i-zero zero kaboni ngo-2050, eceleni kwe-carbon offsets, i-airspace yesimanje kanye nokuqhubeka okusha kubuchwepheshe be-aerospace, kufaka phakathi amasistimu endiza kagesi, i-hydrogen kanye ne-hybrid. Ngenqubomgomo kaHulumeni ehlakaniphile yokuxhasa utshalomali ekukhiqizeni izindleko zokuncintisana kwe-UK SAF, izindiza eziningi kungenzeka ukuthi zisebenzisa i-UK ekhiqizwe i-SAF maphakathi no-2020. Ukufeza ukukhishwa kweNet Zero ngo-2050 kuyinselelo enkulu futhi kuyithuba embonini yethu. Imephu yomgwaqo we-Sustainable Aviation's decarbonisation kanye nezinhloso zesikhashana zibeka imigwaqo ecacile futhi sikulungele ukudlala indima yethu eGatwick, ngokusebenzisa imigomo yemigwaqo eyishumi yokuqala yemigwaqo nokugcina umgwaqo wendlela uvuselelwe ukufaka izixazululo zobuchwepheshe ezengeziwe zama-2030s. ”
Imbewu yeSesame Manje Iyakhunjulwa Ngenxa Ye-Salmonella
Okthoba 29, 2021 ku-19: 41
Hawu, yisihloko esihle kakhulu. Ngiyithanda kakhulu. Ngithemba ukuthi uzoqhubeka nezihloko ezinjalo. Ngiyabonga. Sanibonani.
Okthoba 20, 2021 ku-13: 29
شات العراق للجوال شات صوتي شات عراقنا دردشة عراقية دردشة العرق